Weinstein jury kwuru na ekesara ya na ọtụtụ ụgwọ ọrụ siri ike - ndị mmadụ - na-ekwu okwu ya
Site n'aka Tom Hays na Michael R. Sisak | Associated pịa
NEW YORK - Ndị na-ekpe ikpe na Harvey Weinstein ikpe ikpe na-ekwu na Fraịde kwuru na mmechi ebubo kachasị njọ, mana onye ọka ikpe gwara ha ka ha na-agba mbọ.
N'ime mpempe akwụkwọ nye onye ọka ikpe n'oge ezumike nri ehihie, ndị ọchịagha jụrụ ya ma enwere ike ịkwụsịtụ ya na mmadụ abụọ ga-edina mmadụ n'ike ma a na-enwe mkpebi otu olu na ebubo ndị ọzọ.
Mgbe ya na ndị ọka iwu na ndị ọka iwu anyị nyochachara Weinstein, Ọkaikpe James Burke gwara ndị ọka ikpe nke ụmụ nwoke asaa na ụmụ nwanyị ise ka ha gaa n’ihu n’otu n’otu n’ime mkpebi niile wee chụpụ ha ka ha gaa n’ihu n’ime mkpesa.
Ndị ọka iwu Weinstein kwuru na ha ga-anabata mkpebi ikpe nke akụkụ, mana ndị ọka iwu kwuru na ọ nweghị, Burke jụrụ ịnabata ya.
N'ime ụbọchị nke anọ nke ntụgharị uche, ndị ọka ikpe lekwasịrị anya n'akụkụ dị mkpa nke ebubo abụọ nke mwakpo mmekọahụ: ebubo nke onye na-eme ihe nkiri Annabella Sciorra na Weinstein dinara ma dinaa mmekọahụ nke ọnụ ya n’etiti afọ 1990. Ebubo ndị a na -efe oge ndụ ha niile.
Na ngụkọta, a na-ebo Weinstein dị afọ 67 ebubo ise sitere na mkpesa nke Sciorra na ụmụ nwanyị abụọ ọzọ - onye na-eme egwuregwu budding kwuru na ọ gbara ya n'ike na March 2013 na onye bụbu fim na onye na - emepụta ihe enyemaka. Onye na - egosi TV Mimi Haleyi, onye kwuru na ọ manyere ya n'ike, fellatio na Mach 2006.
Iji maa Weinstein ikpe maka ebubo mpụ nwere mmekọahụ, ndị jurors ga-ekwenye n'ihe abụọ: na Weinstein dinara ma ọ bụ wakpo Sciorra n'ụzọ mmekọahụ na ọ mehiere otu n'ime iwu ndị ọzọ. Ebubo nke iyi nwoke na-edina mmadụ n'ike na-amanye ndị ọka ikpe igosipụta na onye e boro ebubo edinala n'ike ma ọ bụ mpụ ọzọ, ma o nweghị nsogbu mmachi ga-egbochi ihe ndị Sciorra kwuru. na nke ha.
Weinstein kwusiri ike na nwoke na nwanyị niile kwekọrịtara.
Ọ bụ amụma nke Associated Press agaghị ebipụta aha ndị na-ebo ebubo mmekọahụ na-enweghị nkwenye ha. Ọ jụrụ ikpughere aha onye ebubo ebubo ịkatọ 2013, n'ihi na amabeghị ma ọ chọrọ ka emee ka ọha mata ya n'ihu ọha.
Jurors malitere ụbọchị Fraide na Fraịde site na ige ntị n'ọgụ nyocha nke Sciorra na ajụjụ ọnụ ndị ọka iwu gbara ya. Mgbe agụchara ihe dị ka nkeji iri itoolu na-agụ akwụkwọ, ndị na-elekọta ikpe gwara onye ọka ikpe na ha “anụla nke ọma” ma maliteghachi na-eme ihe.
Sciorra gbara akaebe ihe fọrọ nke nta ka otu ọnwa gara aga. Ọ bụ onye mbụ boro ebubo ime nke ahụ na nnwale #MeToo nọ na-ele anya.
Ndị juri tụbara anya na ozi ịntanetị Weinstein zitere banyere Sciorra, gụnyere ndị ụlọ ọrụ nledo nke Israel nke o boro ebubo na ọ na-eweghachi ndị ebubo ebubo ka ndị nta akụkọ na-arụ ọrụ na akụkọ akụkọ ebubo. imegide ya na 2017.
Sciorra, onye dị afọ 59 ugbu a, gwara ndị juridọn etu otu ihe nkiri nkiri dị egwu na mbụ siri gosipụta n’ọnụ ụzọ ụlọ ụlọ Manhattan tupu ya abanye ma dinaa ma na-enwe mmekọahụ ọnụ na ya na mbubreyo 1993 ma obu mbido 1994.
N'ajụjụ ọnụ, Sciorra gbara ya ọkụ n'ihi ihe mere o jiri mepee ụzọ ya na ụzọ ọ nweghị ụzọ ọ ga-esi gbanahụ ya ma ọ bụrụ wakpo ya.
Onye ọka iwu Weinstein, Donna Rotunno jụrụ, "Gịnị kpatara na ị gbaghịla ụlọ ahụ?" I ghapu ya? Gbalịa imebi ya na anya? "
Ndị ọka iwu kwuru na Sciorra dị naanị kilogram 110 (kilogram 50) n'oge ahụ, nke na-emeghị ka ọ bụrụ na ọ dị ka kilogram 300 nke kilogram (135 kilogram).
"Ọ toro ogologo" ịlụ ọgụ, ọ gwara ndị ọchịagha. "Ọ bụ egwu. "
Sciorra weputara otu edemede na New Yorker na Ọktoba 2017 mgbe otu onye n'ime mmadụ ole na ole ọ kọrọ akụkọ banyere ihe ahụ mere, omee Rosie Perez, gwara onye nta akụkọ Ronan Farrow na o kwesịrị akpọ.
Sciorra etinyeghị aka n'okwu omekome ruo mgbe e mechara. Ebubo ya esighi na nkwupụta mbụ ahụ mgbe ejide Weinstein na Mee 2018, mana mgbe tighachiri usoro iwu ole na ole, etinyere ha na mmelite ikpeazụ n'August gara aga.
Ndị ọka iwu Weinstein gbalịsiri ike ịhapụ ya na ikpe ahụ tupu oge ikpe ahụ, na-arụ ụka n'efu na ekwesighi ịhapụ ndị ọka ikpe iji ebubo ndị a n'ihi na ha buru amụma na mkpesa. mwakpo mmekọahụ na 2006.
Ndị ọka iwu Weinstein kwukwara na ọ bụ ikpe na-ezighi ezi ịmanye onye na-emepụta ihe iji chebe onwe ya megide ihe gaara eme ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke narị afọ gara aga. Ha na-arụ ụka na ndị gbara akwụkwọ na-etinye Sciorra na ikpe ahụ iji nweta aha akara na nnọchite ịgba akaebe.
"A kpọbatara Annabella na nke a n'ihi otu ihe kpatara ya na naanị otu ihe kpatara ya," Rotunno kwuru n'okwu mmechi ya na izu gara aga. "A kpọtara ya ka e wee nwee onye akaebe nwere ike kpakpando, onye akaebe ị ga-amata na onye akaebe nke aha ya nwere ike ịpụta ihe."
AI ewepụtala ọgwụ ọhụrụ nke nwere ike ịchekwa ụbọchị - BGR